Sifeyaasha kala duwan ee Ardeyda Somaliland loo caawin doono si ay wax uga bartaan Jaamacadaha kala duwan ee Dalka Federaalka Ruushka maadaama ay hada furantay is qoristii sandka cusub ee 2016.‏ | Berberatoday.com
Sifeyaasha kala duwan ee Ardeyda Somaliland loo caawin doono si ay wax uga bartaan Jaamacadaha kala duwan ee Dalka Federaalka Ruushka maadaama ay hada furantay is qoristii sandka cusub ee 2016.‏
Admission are open for academic year 2016-2017.
A) Marka hore, Waxaanu immigration ka Ruushka uga codsanaynaa Ardey kasta warqad cadeynaysa in uu helo ogolaansho buuxda oo waxbarasho in uu ka helo Dawlada Ruushka inta aanu wada buuxin shuruudaha waxbarasho oo aanu Safaarada ka doonan Visaha Waxbarasho ee Jaamacadaha Dawlada Federalka ah ee Ruushka.
B) Hadii Ardeygu uu buuxin waayo Shuruudaha Waxbarasho ee Jaamacadaha dalka Ruushka amase uu bixin kari waayo oo qaali ku noqoto fiiga waxbarasho ee Jaamacadaha dalka Ruushku waxaanu ka caawindoona Ardeygaa ama ku dhiiri gelinaynaa una fududeyn doonaa in uu Ardeygaasi uu waxbarasho Jaamacadeed ka dalbado Dawladaha kale ee Ukrain ama Turkiga. amase waxaa siin doona una gunti doonaa Talooyin hufan oo uu ku heli karo Full scholarship ama uu ku geli kara Jaamacadaha Dawlada ( State Universities ) oo iyaga fiigoodu had iyo jeer uu aad u jaban yahay.
Hawl-fududeynta aanu ku caawin-doono Ardeyda Somaliland ee jecel in ay wax ka bartaan Jaamacadaha Dalka Federaalka ee Ruushka waxaa ugu muhiimsan oo aanu ardeyda ku saacidi doonaa qodobadan hoose:
7- In aanu ka caawino si ay u maraan baadhis caafimaad oo qeexaysa in aanay qabin xanuunka dilaaga ah ee AIDS.
9- In aanu dhamaan Shahaadaha uu ardaygu sito uga sharciyeyno (legazation ) Hayadaha ay khusayso